Duqa Muqdisho oo kormeer shaqo oo isla-xisaabtan ah ku tagay qaar kamid ah wadooyinka Muqdisho & xarumaha Dowlada Hoose Xamar | BRA
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Kormeer ujeedkiisu ahaa islaxisaabtan waxaa uu ku tagay dhowr meel oo kamid xarumaha dowlada hoose iyo wadooyinka Muqdisho.
Goobaha uu tagay ayaa waxaa kamid ahaa Isgooska Fagax oo kamid isgoosyada ugu mashquulka badan ee magaalada Muqdisho kaasi oo xiligaan biya dhigay roobkii da’ay iyadoo uu hakad galay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha, balse dowlada hoose Xamar ayaa halkaa ka wada howla lagu nadiifinaayo wadadaasi.
Xarunta dhallinyarada gobolka Banaadir ayuu sidoo kale duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish booqday waxa uuna warbixin ku saabsan dhismaha xaruntani iyo howlaha lagu qabtay ka dhageestay hogaanka ururka dhallinyarada gobolka Banaadir.
Waxaa uu sidoo kale kormeeray waaxda dad-dhigista oo kula kulmay agaasimaha waaxdaasi Sharmaarke Abuukar iyo shacabkii loo qidmeynaaye isagoo ka xog wareestay howlaha kala duwan oo ay bulshada u haayan.
Xarunta dad-dhigista dowlada hoose Xamar ayuu kormeerkiisa islaxisaabtanka ah kusoo gunaaday guddoomiyaha gobolka Banaadir waxa uuna kula dardaarmay taliska ciidanka ilaalinta dowlada hoose inaan la aqbali doonin habacsanaan ku imaada howlaha bulshada loogu qidmeynaayo iyo bilicda Caasimadda.
dhigista dowlada hoose Xamar ayuu kormeerkiisa islaxisaabtanka ah kusoo gunaaday guddoomiyaha gobolka Banaadir waxa uuna kula dardaarmay taliska ciidanka ilaalinta dowlada hoose inaan la aqbali doonin habacsanaan ku imaada howlaha bulshada loogu qidmeynaayo iyo bilicda Caasimadda.
Markuu uu kormeer kaasi soo idlaaday ayuu guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) la hadlay Warbaahinta, isagoo faahfaahin ka bixiyay goobihii uu kormeeray waxyaabihii uu ku soo arkay.